Multi Function အကာအကွယ်ဖန်သားပြင်မျက်နှာဖုံး
ဖေါ်ပြချက်:အကာအကွယ်မျက်နှာအကာအကွယ်, မျက်နှာအဖုံးမျက်နှာဖုံး, ရှင်းလင်းသောမျက်နှာဖုံး, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမျက်နှာအကာအရံ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မျက်နှာဖုံး Shield
မျက်နှာဖုံး Shield ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အကာအကွယ်မျက်နှာအကာအကွယ်, မျက်နှာအဖုံးမျက်နှာဖုံး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရှင်းလင်းသောမျက်နှာဖုံး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တစ်ခါသုံးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်နှာမျက်နှာပြင်အပြည့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Womens Best Cheap Face Shield  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသော Multi Use Face Shields  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အပြာရောင်မျက်နှာအဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေမှုန်ရေမွှားနှင့် Splatter အဘို့အပြည့်အဝမျက်နှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဒိုင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစားထိုးပလပ်စတစ်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင် Shield ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Anti-fog Adjustable သွားဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာအပြည့်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မျက်နှာအကာအကွယ်မျက်လုံးနှင့်မျက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မျက်နှာကြက်မျက်နှာပြင်အပြည့်သုံးပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်မျက်နှာမျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေမှုန်ရေမွှားများအတွက်အပူခံမျက်နှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဒိုင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကာအကွယ် Anti-Fog Body Fluids သည်မျက်နှာကိုအကာအကွယ်ပေးသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွားဖုံးမျက်နှာပြင်သည်ပလတ်စတစ်အကာအကွယ်ပေးသောရုပ်ရှင်နှင့်အတူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်နှာမျက်နှာပြင်အပြည့်အကာအကွယ် Visor  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အနောက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမှ Flip-up Visor ဖြင့် Face Shield  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
All-Purpose Face Shield Transparent Protect Mask  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ချိန်ညှိ Transparant ပြန်သုံးနိုင်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်နှာ Shield ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဂဟေဆော်ခြင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Face Shield  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြာရောင် Transparant မျက်နှာအပြည့်မျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Transparent Single Mask Shield Visor Protection  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Saliva Anti-Saliva မျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှုမျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောအပြည့်အ ၀ မျက်နှာဖုံး အကာအကွယ် Mask Shield ကိုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ၁။ သင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကိုဝတ်ဆင်ပါ။ splash mask ၀ တ်နေစဉ်မျက်မှန်တပ်ပြီးသို့မဟုတ်မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ၀ တ်ဆင်ပါ။ ၃။...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်နှာမျက်နှာပြင်အပြည့်မျက်နှာပြင် Shield အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးသည်အဓိကအားဖြင့်မျက်လုံးအကာအကွယ်အပါအ ၀ င်မျက်နှာတစ်ခုလုံးအတွက်အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ အကာအကွယ် mask...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာပြင် အချို့သောသူများသည်အလုပ်၏ထူးခြားမှုကြောင့်အချို့သောအန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများ (သို့) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့မိမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကျွမ်းကျင်သောအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောအကာအကွယ်မျက်နှာမျက်နှာပြင်အပြည့်မျက်နှာပြင် Shield စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင်လူတို့၏မျက်နှာများသည်မြန်နှုန်းမြင့်အမှုန်များ၊ အရည်ပျော်သောသတ္တုများ၊...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောလုံခြုံစိတ်ချရသောမျက်နှာအကာအရံမျက်နှာမျက်နှာပြင် သရဖူအသစ်များကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အသက်ရှူကိရိယာနှင့်မျက်နှာဖုံးများ ，...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောလုံခြုံစိတ်ချရသောမျက်နှာအကာအရံမျက်နှာမျက်နှာပြင် မျက်နှာဖုံးသည်မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးထက်အကာအကွယ်ပေးသောflyingရိယာသည်ပျံတတ်သောအမြှုပ်များကိုကာကွယ်ရန်ပိုကောင်းသည်။ မျက်နှာဖုံးများ၏စာရင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ လူတစ် ဦး...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာဖုံး မျက်နှာပြင်၊ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်တို့ကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ မျက်နှာဖုံးဒိုင်းလွှားကိုအသုံးပြုခြင်းနယ်ပယ် - သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ ရောဂါဗေဒ၊ ကိရိယာများရှင်းလင်းခြင်း၊...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာပြင် အသေးစိတ်: Thickness 0.25mm Wide 217mm Length 325mm Material PET Characteristic1 More protection, more effective, safe and secure. Characteristic2 High quality sponge strip, double-layer pet...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာပြင် မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များကိုရှင်းလင်းပါ ： 1. ရှင်းလင်းသောမျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်သည်စွန်းထင်းနေသလား၊ ပျက်စီးသည်ဖြစ်စေစစ်ဆေးပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအချိန်မီရှင်းလင်းပါ ၂။...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာဖုံး မျက်နှာဖုံး Shield အသေးစိတ်: Mask Shield Thickness 0.25mm Wide 217mm Length 325mm Material PET Mask Shield Characteristic1 More protection, more effective, safe and secure. Mask Shield...
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောအပြည့်အ ၀ မျက်နှာဖုံး Mask Shield ၏ကောင်းကျိုးများ - ၁။ Mask Shield သင်၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ တံတွေးများမျက်စိအတွင်းသို့ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီးကူးစက်လွယ်ပါသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ မျက်နှာဖုံး Shield ပေးသွင်း
Multi Function အကာအကွယ်ပေးသည့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး၊ မီးဖိုချောင်တွင်မီးအိမ်သည်အသားအရေကိုထိခိုက်စေသည်။ Oil splash mask သည် lampblack မျက်နှာပေါ်သို့မသွားရန်ငြင်းဆန်သည်။ မှန်ဘီလူးသည်ရှုထောင့်နှစ်ဆနှင့်မြူမှုန့်ဖြစ်ပြီးကြည်လင်သောအမြင်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ၊ အိမ်သုံးနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများအတွက်
အကာအကွယ်မျက်နှာအကာအကွယ် မျက်နှာအဖုံးမျက်နှာဖုံး ရှင်းလင်းသောမျက်နှာဖုံး ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမျက်နှာအကာအရံ အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံး